Articles | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
All Articles or Writngs of Dr Chit Nge are filed under this category.
Posted on January 8, 2017 by chitnge
Something about Nirvana နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတစေ့တစောင်း ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားလွှာ အခမ်းအနားစတင်သည့်အချိန်မှစပြီး Live ကို Youtube မှ တစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်ခ် တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နေ့ရက် အချိန်ကို သတိပြုပါရန်။ Tags: Buddhism
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism	| Leaveacomment
Posted on December 10, 2016 by chitnge
ဒါတွေလေ့လာသိရှိခဲ့ရတယ် — လေ့လာသိရှိ တွေ့သိခဲ့ရသလောက်တော့ အနော်ရထာ လက်ထက်က ဘုရားတွေ တအားတည်တာပဲ။ ဘုရားတည်ပုံရတယ်။ အနော်ရထာ တည်တဲ့ဘုရား မရှိတဲ့ဒေသကတော့ တော်တော့်ကို ရှားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘုရားတည် တော်တော်ဝါသနာပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ ဘုရင့်နောင် လက်ထက်မှာ အတော်ပြတ်သား ပိုင်းခြားတာပဲ။ အကုန်လုံး ဖြတ်တောက်ပစ်တဲ့ သဘောပဲ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကတော့ စံနမူနာ တင်လောက်အောင် သမိုင်းဝင်ပါပဲ။ အလောင်းဘုရား လက်ထက်မှာတော့ စစ်တိုက်တော်တော် ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ စစ်ရေးတွေပဲ တိုက်နေတာပဲ။ တိုက်ရေးခိုက်ရေးကို တော်တော့်ကို ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ ဇွတ်နှစ်ပြီးတော့ တိုက်တဲ့သဘောပဲ။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Myanmar Posts	| Leaveacomment
Posted on September 30, 2016 by chitnge
၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၁၇) ပျက်ဖို့ဖြစ်လာတာ မေး။ ။ဆရာကြီးခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီ။ ဖြေ။ ။ကောင်းသော ရောက်ခြင်းပါပဲ။ မေး။ ။ဆရာကြီးကို သတိရတဲ့အခါ ကျွန်တော်က ဖြစ်ပျက် ရှုပါတယ်။ ဖြေ။ ။ဖြစ်ပျက် ရှုတာတော့ အမှန်အကန်ပဲလေ၊ အကျိုးလည်း ရှိတာပဲ။ ဖြစ်တာတွေက ပျက်ဖို့ပဲ — မေး။ ။ခင်ဗျာ ဆရာကြီး။ ဖြေ။ ။အော် ဖြစ်တာတွေက ပျက်ဖို့ပဲ။ ပျက်ဖို့ ဖြစ်လာတာ – No tags for this post.
Posted in Buddhism	| Leaveacomment
Posted on August 20, 2016 by chitnge
ပဋိပတ္တိသာသနာမှာ စာရေးသူ ပဋိပတ္တိသာသနာပြုစဉ်က ရဟန်းသံဃာများ၊ သီလရှင်များနှင့် ယောဂီများ တော်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ စာရေးသူရဲ့ ကုသိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပတ္တိသာသနာမှာ တစ်ခေတ်ဆန်း သကဲ့သို့ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူလည်း ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန် ဆိုသလို – ဆရာကောင်း သမားကောင်းရဲ့ အဆိုအဆုံးအမတည်ပြီး – Tags: Buddhism, Myanmar Posts
Posted on August 11, 2016 by chitnge
ယုံကြည်မှု ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရာနှုန်းအနည်းအများတော့ ရှိတာပါပဲ။ တိုင်းတာတဲ့ ပေတံကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဟာ လုပ်ဖို့နဲ့၊ ကျန်တဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ဖို့ ယှဉ်လာရင် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘက်ကို လိုက်ရင် – ဒါ ယုံကြည်တာပေါ့။ ယုံကြည်ပေမယ့် ဖြစ်ချင်တာဘက်ကို လိုက်သွားတော့လည်း ယုံကြည်မှု အားနည်းတာပေါ့။ ယုံကြည်ခြင်းကတော့ လျော့နည်းတိုးဆုတ် ရှိကြမှာပါ။ ကျွန်တော် တရားလိုက်တယ်၊ ဆရာကောင်းကို ဖူးတွေ့ရတယ်၊ နည်းနိသျှတွေ Tags: Buddhism, Myanmar Posts
Posted on August 10, 2016 by chitnge
အကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်း(၃) ဖွားစန်းက စီမံကိန်း အောင်မြင်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) (၄) (၅) နှစ် ကတည်းက တရားကို အကြိတ်အနယ် ရှုနေတာ၊ တရားမှ တရားပဲ။ စားတာသောက်တာလေး အချိန်ပေးပြီး တရားမှ တရားပဲလုပ်တာ။ တစ်ချိန်ကျတော့ သူတော်တော် ရှုနိုင်သွားပြီး အောင်မြင်သွားပုံရတယ်၊ အောင်မြင်လည်း အောင်မြင်ရော သူက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အကြောင်းကို မပြုတော့ဘူး၊ ထည့်လည်း မတွက်တော့ဘူး၊ စဉ်းလည်း မစဉ်းစားတော့ဘူး၊ ဝေလည်း မဝေဖန်ဘူး။ ဘာကောက်ချက်မှလည်း မပေးဘူး။ သူ့ခန္ဓာကို စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ပဲ။ … Continue reading →
အကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်း(၂) စာရေးသူတို့အဖွဲ့ အခုတစ်လောတော့ ဖွားစန်းအကြောင်းကိုပဲ ပြောပြနေဖြစ်တယ်။ ဖွားစန်း အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ အဖွဲ့က ၀ိုင်းပြီးသာဓုခေါ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပြင် ပရိသတ်အတွက်ပါ အနည်းငယ် ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဖွားစန်း အောင်မြင်တယ် ဆိုတာက ဒီခေတ်မှာ ပဋိပတ္တိအောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ် ဒါကြောင့် တစ်ချို့ နားလည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ နားလည်နိုင်အောင် ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် – (၁) ပဋိပတ္တိကို မလုပ်ကြဘူး၊ လုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူး၊ မကျင့်ဘူး (၂) ကျင့်တယ် ဇွဲမရှိဘူး၊ စနစ်မရှိဘူး၊ ဆရာကောင်း မရှိဘူး။ ဒီအခါမှာ မရကြဘူးပေါ့။ … Continue reading →
Posted on August 9, 2016 by chitnge
အကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်း မမျိုးက ဖွားစန်း အကြောင်းရေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အမြွက်မျှ ရေးချင်လာပါတယ်။ ဖွားစန်းဟာ တော်တော် တော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ခန္ဓာမစွန့်ခင် (၃) (၄) နှစ် ကတည်းက တရားမှ တရား ဆိုပြီးတော့ အားထုတ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ တော်တော် ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်ပါ။ (၃) (၄) နှစ် တော်တော် ပြင်ဆင်တဲ့အခါကျတော့ ခန္ဓာစွန့်ကာနီးကျ သူ့မှာ အကြွေးမရှိတော့တဲ့ သဘောပါပဲ။ သူ့မှာ ရှင်းနေတာပေါ့။ ဒီတော့ ဘာမှ မလိုဘူးပေါ့ – … Continue reading →